Fantaro i Sasil Sánchez Chan, mampiatrano ny kaonty Twitter @ActLenguas mandritra ny herinandron’ny 11-17 marsa 2019 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Marsa 2019 4:53 GMT
Sary natolotr'i Sásil Sánchez
Amin'ity taona 2019 ity izahay manasa mpampiatrano maro hitantana ny kaonty Twitter @ActLenguas (Fahavitrihana ara-piteny) sy hizara ny zava-niainan'izy ireo amin'ny famelomana indray sy amin'ny fampiroboroboana ny tenin-drazany. Ity indray ary ny lahatsoratra momba an'i Sasil Sánchez Chan (@Iussasil) sy izay kasainy horesahana mandritra ny herinandro hitantanany ny kaonty.
Sasil Sánchez Chan no anarako, avy ao Xaya, Tekax, Yucatán aho. teny saikanosy Maya ny fiteniko, mirotsaka amin'ny fanoratana sy amin'ny fampiroboroboana ny fampiasana ny fiteny aho, ka mifantoka amin'ny fampitam-baovao.
Manana fisiana ny fiteny Mayana amin'ny tambajotra sosialy, indrindra fa amin'ny Facebook. Soa ihany fa nisy ny aingam-panentanana fampiroboroboana sy fanamafisam-boho ifanaovan'ny mpiteny, amin'ny sehatra tahaka ny literatiora sy hira, indrindra fa amin'ny hira rap tao ho ao izay.
Tiako ny hifantoka amin'ny lahatahiry bainga (fizika) momba ny fiteny, hizara horirantavan'ny olona miasa hampiroboroboana ny fiteny Mayana ihany koa aho, hizara votoaty sy hetsika hotanterahana mandritra ny herinandro mifandraika (amin'ny herinandro itantanako).
RV: Inona no tena nampazoto anao ho mpikatroky ny teninareo eo amin'ny sehatra nomerika?
Ny mampazoto ahy voalohany indrindra dia ny fahatraran'ny fiteniko ambaratonga ambony kokoa eo amin'ny sehatry ny fijoroana amin'ny fampitam-baovao nomerika, mandray azy ho fitaovana hanombohana dingam-pahaiza-mamaky teny sy manoratra ho an'ireo mbola tsy afa-niditra tao aminy ary ho fomba iray handraketana ny toetry ny fiteny amin'izao fotoana.
RV: Inona avy ny nofinofinao sy ny fanantenanao amin'ny fiteninareo?
Manonofy aho fa ho betsaka kokoa ny fampitam-baovao mety ahitana ny fiteniko ary amin'ny hoavy any ho afa-miteny aho fa misy izy miainga avy amin'ireo lasitra (sehatra) mankany amin'ny programa sy votoaty tsy amin'ny fiteny Maya ihany fa amin'ireo fiteny zanatany maro.